Izindaba - Ulwazi Oluyisisekelo Lokuthwala
Uyazi ukuthi ziyini izingxenye zemishini ezinamabheringi? Zibizwa ngokuthi “ukudla kwemboni yemishini” futhi zisetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ezahlukahlukene ezibalulekile zemishini. Ngoba lezi zingxenye ezibalulekile zisebenza endaweni engabonakali, imvamisa aziqondakali ngabangewona ochwepheshe. Ochwepheshe abaningi abangewona imishini abazi ukuthi yini amabombo.
I-orientation yingxenye esiza into ukuthi ijikeleze, eyaziwa ngesiJapane ngokuthi i-jikuke.Njengoba igama lisho, ukuthwala yingxenye esekela "shaft" ejikelezayo emshinini.
Imishini esebenzisa amabheringi ifaka phakathi izimoto, izindiza, ama-generator nokunye.Izinsimbi zibuye zisetshenziswe ezintweni zasendlini ezinjengeziqandisi, izinto zokuhlanza umshini nezomoya.
Kule mishini, amabheringi asekela i- “shaft” enamasondo agibelekile, amagiya, ophephela, ama-rotor nezinye izingxenye ukuyisiza ijikeleze kahle.
Njengomphumela wemishini ehlukahlukene yokusebenzisa "ishafula" eningi ejikelezayo, ngakho-ke ukuthwala sekuyizingxenye ezibalulekile, ezaziwa ngokuthi "ukudla kwemboni yemishini." Le ngxenye ingabonakala ingabalulekile, kodwa ibalulekile. Ngaphandle kwayo, singakwazi ' ngiphile impilo ejwayelekile.
Nciphisa ukungqubuzana futhi wenze ukujikeleza kuzinze kakhudlwana
Kufanele kube nokungqubuzana phakathi kwe- "shaft" ejikelezayo nelungu lokusekela elijikelezayo. Amabhere asetshenziswa phakathi kwe "shaft" ejikelezayo nengxenye yokusekela ejikelezayo.
Amabhere anganciphisa ukungqubuzana, enze ukujikeleza kuzinze futhi anciphise ukusetshenziswa kwamandla. Lona ngumsebenzi omkhulu wokuthwala.
Vikela izingxenye zosizo ezijikelezayo bese ugcina "i-eksisi" ejikelezayo isendaweni efanele
Kukhona amandla amakhulu phakathi kwe- "shaft" ejikelezayo nengxenye yokusekela ejikelezayo. Ukuthwala kuvimbela ilunga lokwesekwa elijikelezayo ukuba lingoniwa yileli gunya futhi ligcina “shaft” ejikelezayo isendaweni efanele.
Impela kungenxa yale misebenzi yokuthwala ukuthi singawusebenzisa kabusha lo mshini isikhathi eside.